१० दिनपछि आएको शालिकराम पुडासैनीको पो ष्टमा र्टम रि पोर्टमा के छ ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/१० दिनपछि आएको शालिकराम पुडासैनीको पो ष्टमा र्टम रि पोर्टमा के छ ?
काठमाडौं। पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको पो ष्टमा र्टम रि पोर्ट आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले तयार पारेर पठाएको रि पोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन पुगेको छ । शालिकरामकी पत्नी सम्झनाले काठमाडौं प्र हरीमार्फत दिएको रवि लामिछानेसहित ३ जनाविरुद्धको कि टानी जा हेरी र शिक्षण अस्पतालले पठाएको पो ष्टमा र्टम रि पोर्ट सँगसँगैजस्तो चितवन पुगेको हो ।
प्र हरीले पो ष्टमा र्टम रि पोर्ट र अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट थप नयाँ तथ्य फेला परेको जानकारी दिएको छ । यद्यपि रि पोर्टमा के लेखिएको छ भन्ने प्रस्ट बताउन नमिल्ने बताएको छ । ती थप तथ्यहरु भोलि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ किनकि तीनै जना अभियुक्तलाई अनुसन्धानको लागि हि रासतमा राख्न जिल्ला अदालत चितवनले दिएको म्याद आज सकिँदैछ र भोलि तीनै जनालाई अदालत पेश गरिँदा यो अवधिमा प्राप्त थप तथ्यहरु समेत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सि आइबी) समेत परिचालन गरिएको छ । सि आइबी टोलीको नेतृत्व गर्दै एसपी दीपक रेग्मी चितवन पुगेका छन् । रेग्मीको नेतृत्वमा ५ जनाको टोली छ । यो टोलीले चितवन प्र हरीले गरिरहेको अनुस न्धानमा सघाउने बताइएको छ ।